Olom-pirenena fijerena fakan-tsary vita amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Ny fijerin'ny olom-pirenena ny fakan-tsary mifono vatana
Ny fakan-tsary niakanjo vatana no lohahevitra mafana satria ny fanaparitahana azy dia tazana tany Etazonia sy Etazonia tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay. Betsaka ny olona nanontany ny anjara andraikiny amin'ny fampiharana ny lalàna fanampiana. Eny, tsy misy isalasalana fa ireo cams ireo dia nanampy tamin'ny fampihenana ny tahan'ny heloka bevava. Fa izay ny eritreretin'ny olona amin'ireto cams ireto ary izay ny fahitany azy ireo dia fanontaniana tokony hosaintsainina ihany koa. Ity lahatsoratra ity dia handrakitra an-tsipiriany momba izay Ny fomba fijerin'ny olom-pirenena momba ny fakan-tsary mitazona vatana.
Ny fijerin'ny olom-pirenena ny fakan-tsary vita amin'ny vatana:
Ny fakan-tsary mitafy vatana (BWCs aorin'izao) dia ampiasaina hanangonana horonam-peo sy horonam-peo fihaonana eo amin'ny polisy sy ny olom-pirenena. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny BWC dia naparitaky ny masoivohon'ny polisy any amin'ny firenena maro toy ny any Etazonia, Aostralia ary ny firenena eropeana. Ny BWC dia ampiasaina indrindra hisorohana ny fanavakavahana ataon'ny polisy sy ny fihaonana amin-kerisetra (izany hoe ny fitifirana polisy mahatsiravina amin'ny olom-pirenena), mampiroborobo ny kalitaon'ny fifandraisana eo amin'ny polisy sy ny olom-pirenena, ary hanatsara ny fahatokisan'ny olom-pirenena ny polisy.
Vokatry ny sivily:
Ny fiatraikan'ny sivilizasiona dia hita teo amin'ny vahoaka. Asehon'ny fandinihana fa tsy dia mandositra ny olona raha mahafantatra fa voatazona kasety izy ireo. Ny fihetsiky ny olona dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny polisy taorian'ny fametrahana ireo BWC. Nisy fidinana mahavariana tokoa momba ireo manamboninahitra manao fakan-tsary. Miresaka ny filaharan'ny 88 na 90 isan-jato izahay. tsy dia mirona amin'ny fitondran-tena tsy mahalala fomba na tsy mendrika ny manamboninahitra, ary tsy dia masiaka sy mahatohitra ny olom-pirenena. Tena mahavariana izany.
Matoky ny polisy:
Ny fahazoana fahatokisana lehibe ny polisy no hita tato anatin'ny taona vitsivitsy. Rehefa arahi-maso akaiky ireo mpitandro ny filaminana dia mahatsiaro tsy misy ahiahy ny manodidina ny mpitandro filaminana. Nihena be ny trangan'ny raharaha ratsy nataon'ny polisy. Ny fakan-tsary niakanjo vatana dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fananganana lalàna sy filaminana azo antoka.
Mihena ny kolikoly:
Rehefa manara-maso tsy an-kiato ny mpitandro ny filaminana dia mihena kosa ny kolikoly sy ny kolikoly hafa eo amin'ny sampana polisy. Hita ho fanamaivanana izany ny vahoaka rehefa mahavita mamaha ny olan'izy ireo izy ireo nefa tsy mandany vola be amin'ny asan'ny kolikoly.
Ireo zavatra ireo dia porofo marim-pototra fa ankasitrahan'ny vahoaka ireo gadget ireo raha miantoka ny fiarovana ny fahasalamany sy ny vola ihany koa izy ireo. Ny antsipiriany amin'ny antsipirihany momba ny fahitan'ny olom-pirenena momba ny fakan-tsary mitafy vatana dia nomen'i Michael D. White, Natalie Todak, Janne E. Gaub.
Ny tanjon'ity gazety ity dia ny hanombatombana ireo fomba fijerin'ny fakan-tsary (BWC) amin'ny olona izay nanana fihaonan'ny polisy voarakitra an-tsoratra BWC, ary hijery ny mety ho fiatraikan'ny sivilizasiona amin'ny fitondran-tenan'ny olom-pirenena. Nanomboka tamin'ny volana jona ka hatramin'ny novambra 2015, ny mpanoratra dia nanao dinidinika tamin'ny telefaona tamin'ireo olom-pirenena 249 tao Spokane (WA) izay nahitana fihaonan'ny polisy BWC tato ho ato. Afa-po ny fihetsik'izy ireo nandritra ny fihaonan'ny polisy ary, tamin'ny ankapobeny, dia nanana toetra tsara momba ny BWC. Na izany aza, ny 28 isan-jaton'ny mpandray anjara ihany no mahalala ny BWC nandritra ny fihaonan'izy ireo manokana. Ny mpanoratra koa dia tsy nahita porofo kely momba ny fiantraikan'ny sivilizasiona fa namoaka fampifandraisana lehibe sy tsara teo amin'ny fahatsiarovan'ny BWC sy ny fomba fijerena ny fahamarinana ara-pitsarana.
Ny ambany fakan-tsary misy rihana - Fanitsakitsahana ny fiainana manokana
Miharihary fa misy fotoana iandrasan'ny olom-pirenena ny tsiambaratelo izay mety ho voahitsakitsaky ny fampiasan'ny polisy ny fakantsary mitafy vatana - ny resadresaka nifanaovan'ny zaza iray, ny resadresaka niharan'ny herisetra ara-nofo, ohatra. … Angamba misy polisy iray miresaka amin'ny mpampahalala tsiambaratelo na olon-kafa manandrana maka saina amin'ny asa ratsy. Rehefa voarakitra an'io fihaonana io dia lasa, amina toerana maro, antontan-taratasy ho an'ny daholobe azon'ny olom-pirenena angatahina, amin'ny alàlan'ny gazety ary azo antoka fa avy amin'ny mpampanoa lalàna.
Mazava fa ny polisy sy ny sendikan'ny polisy dia tsy nandray an-tsakany sy an-davany ity teknolojia ity. Manana ahiahy izy ireo hoe rahoviana no ho faty sy hivoaka ny fakantsary, rehefa afaka mandinika ny sary ireo ny mpanara-maso. Ary avy eo, angamba ny zava-dehibe indrindra, ahoana ny fomba hitahirizanao ireo tahirin-tsary marobe ateraky ny manamboninahitra mitafy ireo fakantsary ireo?
Nisy foana ny adihevitra momba ny fotoana tokony hikipahan'ireo fakantsary na oviana ny fotoana tokony hanalany azy. Karazan-tahiry inona no tokony angonin'izy ireo ary karazana data inona no tokony ho tahirizina? Ireo fanontaniana ireo no tena zava-misy, tsy tokony hanitsakitsaka ny fiainana manokana ny olom-pirenena raha ny fihaonana rehetra dia tokony hosoratana. Iza no afaka miditra ao amin'ireo rakitsoratra ireo? Afaka mampiasa izany porofo eo amin'ny fitsarana ve ny mpampanoa lalàna? Eny, mbola tsy voavaly ihany ny valiny amin'ireo rehetra ireo. Ny mpitondra fampiharana ny lalàna izao dia miasa amin'izao fotoana izao hamolavola protocol izay sahaza ho an'ny rehetra. Ny sasany amin'ireo fenitra izay arahana ankehitriny dia ireto manaraka ireto:
Na inona na inona, inona ny fenitra na politika noforonina ho an'ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana, ny zavatra iray izay tokony harahin'ny sampandraharahan'ny lalàna dia ny tsy tokony hanitsakitsaka ny fiainana manokan'ny daholobe. Ireo zavatra rehetra voalaza amin'ny fahatokisana dia tokony ho tsiambaratelo. Manantena izahay fa ireo fitaovana ireo dia manampy ny polisy eto an-toerana sy ireo masoivoho nasionaly hafa mba hanangana tontolo iray amin'ny tahan'ny taha tsy ampy taona.
Ny fijerin'ny olom-pirenena ny fakan-tsary mifono vatana no farany niova: Septambra 26th, 2019 by Admin
3151 Total Views 2 Views Today